MUUQAAL: Shidaalka Somalia, Xiliga lasoo Saarayo, Goobaha laga Baadhay iyo Waxa ka dhacay Shirkii London | KALSHAALE
MUUQAAL: Shidaalka Somalia, Xiliga lasoo Saarayo, Goobaha laga Baadhay iyo Waxa ka dhacay Shirkii London
Feb 9, 2019 - 7 Aragtiyood
London ( Kalshaale ) Waxaa magaalada London ka Qabsoomay Shirkii Looga hadlay arimaha Shidaalka Soomaaliya, Iyadoona ay ka Qayb geleen Wasiirka Bartoorlka Somalia iyo masuuliyiin kale.
Barnaamijka Sahaminta Shidaalka ayaa laga sameeyay ” Mudug ilaa Jubbadda Hoose oo ah dhinaca Badda”, Waxaana Shidaalka oo ah aad u badan la sheegay in hadii lasoo saaro ay noqon doonto Soomaaliya Mid ka Saraysa Imaaraadka iyo Qatar.
Waxaa la shaaciyey inuu Qaadan doono in Barnaamijkan in lasoo saaro Bartoolka Soomaaliya 12-Sano, Taasi oo ku aadan Sanadka 2032 Hadii alle idmo.
3-Milyan oo Qof oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay Barnaamijkan Shaqo toos ah uga Heli doonaan, Balse 15-sano oo Soo Socota ayaa la sheegay inay Soomaalidu u baahan tahay Tababaro, iyadoo maanta ay adag tahay inay Ukun oo saartaan.
Khayraadka intaas le’eg ayaa laga helay kalabadh ka mid ah dalka Soomaaliya, iyadoo ay dhiman yihiin deegaanada Puntland iyo Somaliland, Sidoo kalana uu dhiman yahay Shidaalka kale ee Dhulka ku Jira.
In wax la baaraa ma xuma lkn datada qalabka ay u isticmaleen marka ay survey-ga samaynayeen ayaa muhiim ah waxaa jira 2d 3d 4d ilaa 5d seismic survey 2d iyo 3d waa laga baxay caalamka hadda sidaa looma isticmaalo.Lkn haddi ay meesha la tageen 2d baaritaankaa wax badan baa ka dhiman.
Tan hotelkaan London looga hadlay, iyo wax badan oo looga hadlay arrimaha Somaliiya, caasimado badan, hoteelo badan waa isku mid.
Waxeey isku mid kayahiin, in daanyeerta nijaasta ah ee Somalida, isska dhaaf, wadammo, iyo dalal ee, in eey ka faa’iideeystaan caqli daaanyeernimadooda shirkada, qaas ah, kuwa dowli ah, kuwa danbiilayaal ah.
Maxaa yeelay, kuwa ugu sareeya, amaba ha’ahaado daanyeero Xassan Shiiq Maxamauud, amaba Farmaajo ayaa ah kuwa nijaas ah, oo eey dhaleen nidaamkii fodwada iyo kaligiis taliyanimada ee Somaliya for the fucking last 60 yearso ku dhawaad.
Somaliya wadan ma noqoneeyso. Somaliya sharaf ma lahaaneeytso. Somaliya dulli iyo daanyeernimo ayeey ku dhiman nijaasta Somaliya sheegata waqtiga soo socda muddo dheer. Maxaa yeelay, Somalida waxeey u badan yahiin gaalo, been sheegayaal, xataa kuwooda culumada diinta islaamka sheegta, sidda nijaas Umaal iyo Xassan Daahir Aweeys. Xaniinyo iyo cilmi Islaam, iyo mid maadi ah oo eey ku sheegaan culumadda daanyeerta Somalida ah ma jirraan in eey dhahaan, “war waxaan wax dan u ah dadkeena ma’ahan” Nijaaso kitaabo u bartay, si eey ugu noolaadaan aduunka, haddan, dadka daanyeerta ah uga sheekeeynaya aaqiro..
Marka, gaal iyo musliin, ayaa isku si u wassaya Somaliya. Ethopiya, iyo Imaaraadka ayaa isku si u wassaya Somalida.
Daanyeerta culamadooda Somalida sheegtana, sida kuwa Kenya jooga, Somaliya jooga, Ameriaka iyo Yurub jooga, kuma dhacaan in eey dadkaan cawaanta ah, ee daanyeerta ah runta u sheegaan.
Daanyeeero nijaas ah, oo eey hogaamiyaan daanyeero kale oo nijaas ah, waxeey u noolaans sidda daanyeerada oo kale.
Nacalla dahaman dadka cawaanta ah ee caqliga xun kuyaal. Daanyeero,
Shikarada sahanka Petrole ka baadhay Somaliya waxaa ka aqoon badan xagga qalabka iyo sida loo baadho Petroleka Misgiin wareHouse ka shaqeeya oo Ka yimid Garoowe.
Meeshan waa lagu masgax guurayaa.
Keyboardka ayaa dadkii waalay.
Cali Xaraare ayaan hadalkaa ka iibsaday.
BaHaL sxb kuwii yaryaraa ee xasuuqii borame xusayay ma birtay dhafiyeen iidoorkii waar nimankaa iidoor way yaqaanaan sida laangaabyada lookarbaasho car juuqdhe ayaa kadhacday meesha samaroon fadhatadii hargaysa markii lagacafiyay ayay kibreen
Adiga waxaan kaa waraysanaynaa cayda iyo hablihii aad iibin jidhey ee kula dhashay caqli iyo cilmi kale.
Qlabka lagahadlayaa balaayiin doolar buu joogaa lamana geeyo lagumana aamino dhul aan nabadgelyo buuxda lahayn. Waan hubaa hadii ay qalab meeshaa ku nasiibiyeen inay geeyeen kaa aan sheegayo ee 2d scrap ah oo qarni ka hor la isticmaalayey oon wax qiimaa ku fadhiyin.
Maxaan idiin sheegay 2d iyo qashin bay geeyeen meesha This event is also expected to include geological presentations gained through insight provided by Spectrum’s 2D seismic data across the open blocks.
War bixintaa waa page kooda
Qariyo ku taalo Yemen ayaa Petrol laga helay, waaba la ogaa tii ka dhacdey
Waxey dhaheen ilaa gurikasto la geliyo TUBO PETROL ah waxaan loo gudbineyn – Yemeninta kale ( almiino Shiikhul Qariyaha waa in loo geliyo)
Dagaal iyo Tusaaleyn inuu petrol keenikaro dhibaato ka dib ayaa dhuumihii la jeexey.
Hadda Reer Hobyo waxey dhihidoonan ilaa Cadaado waa in Tubooyin naloo geliyo.
* Petrolka soo saara aan baahi beelnee